चिनियाँ उत्पादन “ऋण जाल” हो कि?_china.com
चिनियाँ उत्पादन “ऋण जाल” हो कि?
गत सेप्टेम्बर महिनासम्ममा चीनले “बेल्ट एण्ड रोड” क्षेत्र वरिपरिका १०५ मुलुक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग १४९ सरकारी सहयोग दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म चीन र “बेल्ट एण्ड रोड” मा आबद्ध तथा वरिपरिका मुलुकबीचको कूल निर्यात-आयात रकम ३३२ खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ र प्रतिवर्ष सरदर ४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ।
त्यसकारण तथाकथित “चिनियाँ ऋण जाल”मा परेका मुलुकहरुले छुट्टा-छुट्टै रुपमा पश्चिमी मुलुकको धारणाको विरोध गरेका छन्। फिलिपिन्सको वैदेशिक ऋणमा चीनबाटको ऋण १ प्रतिशत मात्र भएकाले “ऋण जालमा” नपरेको फिलिपिन्स विदेशमन्त्री एलन पेटर कायेटानोले व्यक्त गर्नुभयो। चीनलगायत अरू देशका लगानीकर्ताले जिबूतीमा कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने जिबूतीका अर्थमन्त्री डावालेहले व्यक्त गर्नुभएको छ। जिबूतीको विकास जिबूती सरकारद्वारा निर्णय गरिएको र कुनै मुलुकको जियोपोलिटिक्ससँग सम्बन्धित नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उपराष्ट्रपति पेन्सले आफ्नो सम्बोधनमा अमेरिकाले केही मुलुकलाई न्यायसंगत ढंगले र स्पष्ट छनौट दिने घोषणा गर्नुभयो। तर सबैलाई थाहा छ, अमेरिकी सरकारको वचनबद्धतापछाडि “अमेरिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने” सिद्धान्त छ। जिबूती सिल्क रोड अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका प्रमुखले यसरी टिप्पणी गर्नुभयो-“चीनभन्दा अमेरिकाले पहिला जिबूतीमा प्रवेश गरेको थियो। तर हालसम्म जिबूतीका लागि अमेरिकाले के के गरेको छ त? केही पनि छैन।”